Fifampiarahabana eny Iavoloha, famoahan’ny Ceni voka-pifidianana… : misy mieritreritra hanakorontana… | NewsMada
Fifampiarahabana eny Iavoloha, famoahan’ny Ceni voka-pifidianana… : misy mieritreritra hanakorontana…
Mafanafana ny toe-draharaham-pirenena? Eo ny fifampiarahabana eny Iavoloha, anio; ny famoahan’ny Ceni ny voka-pifidianana vonjimaika, rahampitso. Misy mieritreritra fanakorontanana amin’izany…
Efa mahazatra? Na noho ny fanahiana lava… Aleo mailo. Misy hetsika maromaro amin’ny faramparan’ity herinandro ity: fifampiarahabana eny Iavoloha, anio; famoahan’ny Ceni ny vokatra vonjimaika ny fifidianana loholona, rahampitso; diabe kasain’ny Hetsika Madagasikara miaro ireo Nosy manodidina miainga eny Ambohijatovo, rahampitso. Misy koa ny fandaminan’ny kaominina Antananarivo ny tsena sy ny fifamoivoizana.
“Ireo rehetra ireo: misy ankolafina olona tsy mankasitraka, misy fikambanana ankolafina olona mieritreritra hanakorontana”, hoy ny lehiben’ny CIRGN, faritany Antananarivo, ny jeneraly Rakotomahanina Florens, teny Ankadilalana, omaly.
Eo anoloan’izany, tsy maintsy mandray fepetra ny mpitandro filaminana (Emmo/Reg) eo ambany fiahian’ny Emmo/Far, Antananarivo, araka ny fanazavany.
Mba hizotran’ny fifampiarahabana eny Iavoloha izany fepetra, ny fanambarana ny voka-pifidianana vonjimaika eny amin’ny Ceni, ny fandaminan’ny kaominina ny tsena sy ny fifamoivoizana ao anatin’ny filaminana sy ny fandriampahalemana.
Atao ny tsy hampisy ny hetsika fitakiana ireo Nosy manodidina
“Tsy maintsy raisina ny fepetra tsy hampisy an’io diabe io”, hoy izy momba ny diabe kasain’ny Hetsika Madagasikara miaro ireo Nosy malagasy hatao rahampitso: miainga eny Ambohijatovo mankeny amin’ny masoivoho frantsay, Ambatomena. Io fepetra io: tsy azo atao ny fivorivoriana eny amin’ny kianjan’Ambohijatovo.“Horaisinay ny andraikitra rehetra tsy hampisy io diabe io”, hoy ihany izy. Tsy misy avela hiditra ao Ambohijatovo.
Mpikamban’ny ONU i Madagasikara, voafehin’ny Fifanarahana Vienne: anjaran’ny firenena mampiantrano masoivohom-pirenena ao aminy ny miaro izany masoivoho izany, araka ny fanazavany. Andraikitra tsy maintsy raisina koa ny fiarovana ny masoivoho frantsay eny Ambatomena.
Fanohanan-dRavalomanana ny fitakiana
Nilaza ny mpandrindra ny hetsika fitakiana ireo Nosy manodidina, avy amin’ny Hetsika Madagasikara miaro ireo Nosy, Rakotonirina Grégoire Odon, omaly: “Na azo na tsia ny fahazoan-dalana, hatao ny hetsika”. Miantso ny vahoaka hifanome tanana amin’izany izy. Haseho amin’io ny fitiavan-tanindrazana. Mifanindry amin’ny nandanian’ny filankevitry ny tanàna ny hanokafana ny kianjan’Ambohijatovo izany na mbola iandrasana ny teny farany avy amin’ny prefektiora aza. Nilaza ny fanohanany ny hetsika fitakiana ireo Nosy manodidina rahateo ny filoha teo aloha, Ravalomanana. Mifandray avokoa izany ?
Tsiahivina fa efa nanao ny tsy hahavanona ny hetsika ny mpitandro filaminana, ny 12 desambra 2015. Hanao ahoana ny rahampitso? Ahina ny fifandonana…